XOG: Beesha caalamka oo hal ariin oo xasaasi ah ka dalbaday madaxda ku shirsan Muqdisho | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Beesha caalamka oo hal ariin oo xasaasi ah ka dalbaday madaxda...
XOG: Beesha caalamka oo hal ariin oo xasaasi ah ka dalbaday madaxda ku shirsan Muqdisho
War ka soo baxay Beesha caalamka ayaa madaxda dalka looga dalbaday iney ka qeyb geliyaan wada hadalada socda saamileysa siyaasadda dalka si loo helo wadar ogol hagi kara hanaan doorasho oo loo dhan yahay.
Shirka Muqdisho ka socda waxaa hadda ka qeyb galaya oo kaliya madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxda shanta maamul goboleed ee kala ah Hirshabeelle, Galmudug, K/galbeed, Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo ka shiraya hanaan doorasho oo ku yimid heshiis iyo tanaasul siyaasadeed la ogol yahay.
” Saaxiibada caalamka waxay rajeynayaan in saamileyda siyaasadda ee kale ee Soomaaliyeed ee muhiimka ah sidoo kale lala tashan doono, si loo balaariyo taageerada loo hayo heshiiska iyo hirgelintiisa,” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay siyaasadda dalka.
Sidoo kale, saamileyda siyaasadda kale oo ay ka mid yihiin Xisbiyada dalka iyo xubnaha Bulshada rayidka ahaa ayaa dhankooda dalbaday in laga qeyb galiyo shirarka lagu go’aaminayo aayaha dalka si ay taladooda iyo aragtidooda ugu darsadaan.
Saaxiibada caalamka ayaa madaxda Soomaaliya ka dalbaday iney waxqabadkooda ku hagaan danta Qaranka iyo Himilooyinka dimuqraadiyadeed ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin marxaladdan taariikhiga ah.
Beesha caalamka ayaa ka war dhowreysa natiijada ka soo baxda shirka ka socda Muqdisho, kaas oo ujeedkiisu yahay in go’aan mideysan looga gaaro heshiiska doorasho ee dalka laguna xaliyo madmadowga jira.